မြန်မာနှင့် နယ်မြေချင်းထိစပ်နေသော အိန္ဒိယ အာသံပြည်နယ်တွင် အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်။ – H2Oupdatenews
မြန်မာနှင့် နယ်မြေချင်းထိစပ်နေသော အိန္ဒိယ အာသံပြည်နယ်တွင် အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈:၂၁ နာရီတွင် အိန္ဒိယ အာသံပြည်နယ်၌ ၆.၂ မဂ္ဂနီကျုဒ် ပြင်းအားရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း bdnews24 က ယနေ့ဖော်ပြသည်။
…မြေပြင်အနက် (၆.၂၁ မိုင်) တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်၏ဗဟိုချက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ဘူတန်နိုင်ငံတို့နှင့် အလွန်နီးကပ်နေကြောင်း အမေရိကန်ဘူမိဗေဒတိုင်းတာရေး USGS မြေပုံအရ သိရရှိသည်။
…ငလျင်ကြောင့် ဒါကာမြို့နေများ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားကြသော်လည်း ထိခိုက်သေဆုံး သတင်း မရရှိကြောင်း သတင်း၌ ဖော်ပြသည်။..
.((လကမ္ဘာနှင့် အင်္ဂါဂြိုလ်တိုင် ခရီးဆန့်နိုင်ပြီဖြစ်သော သိပ္ပံခေတ်ကြီးတွင် မုန်တိုင်းတို့ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း ငလျင်လှုပ်မည်ကို ကြိုတင်မပြောနိုင်ကြပါ။
…ရှေး တရုတ်ဧကရာဇ်များလက်ထက်တွင် ငလျင်ကို ကြိုတင်ဟောကိန်း မထုတ်နိုင်သဖြင့် ပညာရှိအများအပြား ခေါင်းဖြတ် သတ်ခံခဲ့ကြရသည်။..
.ငလျင်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီး များပြားလေ့ရှိသော ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လည်း ကြိုတင် မပြောနိုင်သေးပါ။.
..မြန်မာနက္ခတ်ပညာရှင်အချို့သည် ငလျင်နှင့်ပတ်သက်၍ အတော်လေးနီးစပ်ယုံမက တခါတရံ ကွက်တိမှန်ကန်အောင် ဟောပြောနိုင်သည်ကို လေးစားစွာသတိထားမိပါသည်။
…အစစ်အမှန် ပညာရပ်နှင့် ပညာရှင်များ ထွန်းကားပါစေ.
Previous Previous post: ဂျာကာတာ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနှင့် ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံ။ မြန်မာသို့ လာခွင့်ပြုရန် အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ တောင်းဆိုချက် စစ်ခေါင်းဆောင် အကြောင်းမပြန်။ မြန်မာဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည့် အင်ဒိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဆိုသည်မှာ
Next Next post: ကူးစက်ရောဂါကပ်ကြောင့် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများကြားမှ ကမ္ဘာ့စစ်အသုံးစရိတ်မှာ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိ။ အမေရိကန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်၏ ၃၉% ကို သုံးစွဲနေ။ ကမ္ဘာ့ ဂျီဒီပီ ၄.၄% ကျဆင်းချိန်၌ စစ်အသုံးစရိတ် ၂.၆% တိုးလာ